Stairport Sceneries dia manambara shadeX ho an'ny X-Plane
FSX Avaratra andrefana McDonnell Douglas MD-82
Fonosana nohavaozina FSX SAAB 2000
Fanavaozana FSX VC Ho an'ny Rosiana Myasishchev 3MS
Fonosana nohavaozina an'ny mpitondratena FSX Northrop P-61B
Nohavaozina ny FSX Mil Mi-10K Hark
FSX Me-109Z (Zwilling / Twin) Nohavaozina
Fanavaozana ny tontonana FSX ho an'ny Alpha Spitfire
FSX Grumman G-164A AgCat Crop Duster nohavaozina
Fonosana nohavaozina FSX Mil Mi-8MT / T
Fampidinana: 6,934 alaina 928,203 fotoana.
Fotoana hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny Plugins shadeX ho avy:
Tamin'ny voalohany natao ho fitaovana pikantsary dia hita fa mety hahasoa ny vokany X-Plane amin'ny ankapobeny. Noho izany dia niafara tamin'ny fametahana plugin Plugin misy effets tsy manam-paharoa izahay, izay manamarika indrindra ny halalin'ilay blur eny an-tsaha.
Na dia i shadeX mahery aza dia mifantoka amin'ny fampiasana mpampiasa sy mora ampiasaina.
Vao niditra beta izahay ka tsy ho ela.
Sokajy: Vaovao X-Plane